Indwangu ye-RPET (Indwangu Ephindiwe yePET) yaziwa nangokuthi indwangu eluhlaza yebhodlela le-coke.
Indwangu ye-RPET (Indwangu Ephindiwe yePET) yaziwa nangokuthi indwangu eluhlaza yebhodlela le-coke. Luhlobo olusha lwendwangu eluhlaza okotshani olwenziwe kabusha ngentambo eyigugu ye-PET. Umsuka wayo ophansi wekhabhoni udale umqondo omusha emkhakheni wokuvuselelwa Ngokuya ngokuqinisekisa kokuhlola, kungonga cishe ama-80 ...
I-China imemezela 'impi' yokungcola kwepulasitiki
I-China izama ukunciphisa ukusetshenziswa kwemikhiqizo yepulasitiki engaboli futhi ngokubuyekeza umthetho wezimboni zepulasitiki, ngemuva kweminyaka eyi-12 kubekiwe imikhawulo ezikhwameni zepulasitiki. Ukuqwashisa umphakathi ngokungcoliswa kwepulasitiki kukhuphuke kakhulu eminyakeni yamuva, futhi i-Chi ...
Manje kuyaphuthuma ukuvikela imvelo.Iimboni eziningi ziyaqaphela ukubaluleka kokujikeleza kwe-ecof Friendly futhi zihlanganyele ku-RPET futhi zinikele emhlabeni ekuvikelweni kwemvelo. ..
Leyo yibhodlela elidala lempilo entsha, isambulela selanga seCoca-Cola RPET “esizinze” Qingdao North Railway Station
Ngo-Agasti, 2020, lapho kuwela khona abahamba ngezinyawo abakhulu beQingdao North Railway Station, kwafakwa izambulela eziningana ezikhethekile, lapho kwaphrintwa khona izinto ezinezici zeQingdao ezifana ne-spray, i-seagull kanye nezakhiwo. Okugqame kakhulu kube ngamagama athi “Bengijwayele ukuba yibhodlela lepulasitiki ...